စားကျက်မှားပြောင်းခဲ့တဲ့ လိုင်ဗာငှက် ၊ တန်ဟတ် တောင်းဆိုထားတဲ့ လူငယ်လေး ၊ တိုးတက်မှုရှိလာတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
စားကျက်မှားပြောင်းခဲ့တဲ့ လိုင်ဗာငှက် ၊ တန်ဟတ် တောင်းဆိုထားတဲ့ လူငယ်လေး ၊ တိုးတက်မှုရှိလာတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
June 20, 2022 - by Editor
‘တရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်’ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း လီဗာပူးကို စွန့်ခွာပြီး ကမ္ဘာကျော်တွေ စုဝေးရာ PSG ကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့တဲ့ နယ်သာလန် ကွင်းလယ်လူ ဝိုင်နယ်ဒမ် ရဲ့ အခြေအနေ ကတော့ ‘မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်’ ဖြစ်သွားခဲ့ ပါပြီ ။
ဝိုင်နယ်ဒမ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီဂူးဝမ်း ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ခေါ်ယူမှု အဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့သလို အခု နွေရာသီမှာလည်း အပြောင်းအရွှေ့ အကြံပေး လူးဝစ် ကမ်ပိုစ့် က နယ်သာလန်သားကို ရှင်းထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အာဂျင်တီးနား နည်းပြ နဲ့ လီယွန်နယ် မက်ဆီ တို့ကပါ နှစ်သက် သဘောကျတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေး ခံထားရတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် လူငယ်လေး ဂါနာချို ကို ကာလရှည် စာချုပ် အမြန်ချုပ်ဆိုဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ လုပ်ဆောင် နေပြီး အသင်းကြီး နည်းပြ အဲရစ်တန်ဟတ် ကလည်း ဂါနာချို ကို စမ်းသပ် အသုံးပြု ကြည့်ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှူးသစ် ရှာဖွေ နေပြီး မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး ဂျေဆု ကို အဓိက ပစ်မှတ် ထားနေတဲ့ အာဆင်နယ် ဟာ ယူဗင်တပ် မှာ အငှား စာချုပ်ပြည့်လို့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ဆီ ပြန်ရမယ့် ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မိုရာတာ ကို စိတ်ဝင်စား လာတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်းဟာ အာလင်း ဟာလန်း ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့ အတွက် နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် တိုက်စစ်မှူး ဆီဘတ်စတီယန် ဟေလာ ကို ယူရို ၃၃ သန်း + အပိုဆုကြေး တို့နဲ့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အသက် ၂၇ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဟေလာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန်းက အိုင်ယက်စ် အတွက် ၃၄ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဝုဗ် အသင်းက စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ ပေါ်တူဂီ ကွင်းလယ်လူ ဖယ်ဟင်ဟာ ကို ဖူလ်ဟမ် အသင်းကလည်း စိတ်ဝင်စား လာခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ စပို့တင်း လစ္စဘွန်း ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမား အတွက် ပေါင် ၁၅ သန်း သတ်မှတ် ထားပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကို တန်းပြန်တက်လာတဲ့ နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် အသင်းကတော့ ဂျာမန် ကလပ် ယူနီယံ ဘာလင် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား တိုင်ဝူး အဝိုနီယီ နဲ့ မိန့်ဇ် အသင်းခေါင်းဆောင် မူဆာ နီယာကိတ် တို့ကို ဆက်သွယ် ကမ်းလှမ်း ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ အခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာ ဖရန်ကီ ဒီယွန် ရဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက် ဘာဆာ တာဝန်ရှိသူတွေ ၊ ကစားသမား တို့နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေး ပြောဆို နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပြီး နောက်ထပ် ကမ်းလှမ်းမှု အသစ်ကိုလည်း မကြာခင် ပြုလုပ် သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မန်စီးတီး ဟာ စတာလင် အတွက် ယူရို ၅၅ သန်း အနည်းဆုံး အလိုရှိ နေပြီး ၂၅ သန်း + အပိုဆုကြေး ပုံစံနဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
စီးတီး ဟာ အာဆင်နယ် နဲ့ ချဲလ်ဆီး ပစ်မှတ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂျေဆု နဲ့ စတာလင် တို့ကို ရောင်းထုတ် ရာကနေ ယူရို သန်း ၁၀၀ ကျော် ရရှိဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ လူကာကူ အတွက် အင်တာမီလန် ရဲ့ ယူရို ၁၀ သန်း + အပိုဆုကြေး နဲ့ အငှားခေါ်ယူကြေး ကမ်းလှမ်းထားမှု ကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလို့ အီတလီ ကလပ်ကို အသိပေးထားကာ အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စတွေကို လာမယ့် နာရီ အနည်းငယ် အတွင်းမှာ အပြီးသတ်ဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။
အင်တာမီလန် ဟာ ပေါ်လို ဒိုင်ဘားလား အပြင် ရိုးမား ကနေ ပြောင်းလာမယ့် ဟင်းနရစ် မစ်ခီတာရမ် ကို ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ် ဖို့လည်း စီစဉ် ထားပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ တောင်ပံ ကစားသမား မာကို အဆန်ဆီရို ကို ယူရို သန်း ၄၀ ဝန်းကျင် ရရှိပါက ရောင်းထုတ် သွားဖို့ စဉ်းစား နိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ စပိန် သတင်းစာ AS က ဖော်ပြ သွားခဲ့ပြီး လီဗာပူး က အဆန်ဆီရို ကို စိတ်ဝင်စားတေနယ်လို့လည်း ဖော်ပြသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီမီလန် အသင်းဟာ ရီးရဲ ကနေ ထွက်ခွာ လာတဲ့ ဝါရင့် နောက်တန်း ကစားသမားကြီး မာဆယ်လို ကို တနှစ် လုပ်ခ ယူရို ၃ သန်းတန် စာချုပ် နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။
လာလီဂါ ကို ရောက်သွားတဲ့ အီတလီသားကြီး ဂတ်တူဆို ရဲ့ ဗလင်စီယာ ဟာ အေစီမီလန် ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကတ်စတယ်လီဟို နဲ့ ဘာကာယိုကို တို့ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ကလပ် တိုရီနို အသင်းကတော့ ဝက်စ်ဟမ်း မှာ မအောင်မြင် ခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှား တိုက်စစ်သမား နီကိုလာ ဗလာဆစ် ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ ဆိုဆီဒက် အသင်းကတော့ PSG ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားပြီး ကစားခွင့် နည်းပါးခဲ့တဲ့ အသင်းသားဟောင်း ရာဖင်ဟာ အယ်ကန်ထရာ ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ ကစားသမားနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အိုင်နာကီ အရီချာဘလာတာ ဟာ စပိန် ကလပ် ဘီဘာအို ရဲ့ ဥက္ကဌသစ် ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ များနေပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရခဲ့ပါက လိဒ်ယူနိုက်တက် နည်းပြဟောင်း မာဆယ်လို ဘီယေဆာ ကို ခေါ်ယူ ခန့်အပ် သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျူးလ် ကွန်ဒေး ကို လက်လွှတ် ရနိုင်ချေ ရှိတဲ့ ဆီဗီးလား ဟာ တူရကီ ဈေးကွက်ထဲမှာ နောက်ခံလူ အရှာထွက် နေပြီး ဖီနာဘာချီ ရဲ့ ကိုရီးယား နောက်ခံလူ မင်ဂျေကင် ကို စောင့်ကြည့် နေသလို မိုနာကို ရဲ့ ဘတ်ဒီယာရှီး ၊ ကိုရင်သီဟန် အသင်း ကစားသမား ဂျာအို ဗစ်တာ တို့ကိုလည်း ကင်းထောက် အကဲခတ် နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် လက်ဝှေ့ အကျော်အမော် အန်တိုနီ ဂျိုရှူအာ နဲ့ အိုလက်ဆန်းဒါး ယူဆပ် တို့ ရဲ့ ထိုးသတ်ပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ် သွားမယ်လို့ အတည်ပြု ကြေညာ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ဘတ်စကတ်ဘော အသင်းဟာ မနေ့ညက ဘာစီလိုနာ ဘတ်စကတ်ဘော အသင်းကို အနိုင်ကစားပြီး ဘတ်စကတ်ဘော ချန်ပီယံဆုကို ၃၆ ကြိမ်မြောက် ရယူ ဆွတ်ခူးသွားနိုင် ခဲ့တယ်လို့ သတင်းကြားသိရပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article ပင်နယ်တီ ဗီလိန် ဖြစ်ခဲ့အပြီးမှာ လက်ရွေးစင် အသင်းကနေ အနားယူဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးတဲ့ အမ်ဘာပေ
Next Article ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဖက်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကွင်းလယ်လူလို့ ခေါင်းစဥ်တပ်လိုက်ပြီး အာဆင်နယ်ရော ယူနိုက်တက်ကိုပါ ခေါ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ပေါလ် မာဆင်